အကြောင်းအရာ TABLE - egeomates
ဤစာမျက်နှာကိုအဆိုပါဘလော့ခေါင်းစဉ်အတွက်အသုံးပြုတဲ့မျိုးရှာနေ, ဆောက်လုပ်ဆဲဖြစ်၏ ဒီ post အတွက်သင်တွေ့မြင်နိုင်သည်ပေမယ့် စာရင်းသင်သည် egeomates ဆိုပါတယ်ခဲ့ပြီးသမျှသောအစီအစဉ်များ.
AutoCAD မြို့ပြ 3D
ArcView extension များ
image ကို updates များကို
ထူးထူးအပြားပြား GIS အကြောင်း
15 "အကြောင်းအရာ TABLE" ကို Replies
ဧပြီလ 2018 ပု
Anonimo သူ says:
ကောင်းသောညဥ့်ငါအလွှာ Hondurasque မြစ်များနှင့်လမ်းများရနိုင်ရှိရာ, သူတို့သညျငါ့ကိုအကြောင်းကြားနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်စာမကျြနှာဒါပေမယ့်လည်း ICF နှင့် geoportal ဖြစ်ကြသည်။
နိုဝင်ဘာလ 2017 ပု
Cesar သူ says:
အမေး, ငါသည်ကျောင်းသားလုပ်နေတာဖြစ်၏ GEOMATICA ကျင့်, ME သင့်တည်နေရာရှာတွေ့နိုင်ပါစေ AS, Google Earth ကနေရေးဆွဲဝေဟင်ဓာတ်ပုံတွေပေး, သို့သော်သင့်သည် LOCATION KNOW, မက္ကဆီကိုအပြင်၌နေသောပြီလော
Donato Hector Montañez သူ says:
အောက်တိုဘာလ 2017 ပု
ငါသင်မှားယွင်းစွာ Calle Pedro Echagüe Oeste အမှတ် 149 ပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးအများပိုင်ပုဂ္ဂလိကကျမ်းပိုဒ်အဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတံခါးဝ privacy ကိုလည်းမရှိ, ဒီ site ကိုစန်း Juan မြို့တည်ရှိရာ Sarmiento Norte နှငျ့ဆကျသှယျခဲ့ကြကြောင်းသိစေချင် - Capital ကို စန်း Juan, အာဂျင်တီးနား၏ခရိုင်၏။ အဆိုပါသွေးကြောလမ်း Pedro Echagüeအားဖြင့်တံခါးဝရှိခြင်းမအမှန်မှာကအများပြည်သူညွှန်ပြမထားဘူး။ ဒီတော့စုဆောင်းခြင်းတောင်းဆိုမှုကိုကြောင်းမှတ်ချက်မှန်နဲ့ပုံရိပ်တွေကိုအားဖြင့်စီးဆင်းဖျက်ကြောင်းတောင်းဆိုချက်ကိုဒီတော့လျှင်ထွက်ရှာတွေ့မှပထမဦးဆုံးယူရမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ 2017 နိုင်ပါစေ
အဆိုပါ template ကို Exel အတူ။ အထက်ပုဒ်မအတွက် link ကိုဖြစ်ပါတယ်။
Alfredo သူ says:
ဘယ်လိုဒဿမ UTM ဖို့ပထဝီကိုသြဒီနိတ်များစာရင်းကိုပြောင်း
နိုဝင်ဘာလ 2016 ပု
ယေဘုယျအားဖြင့်သင်တို့ကို system ကိုသြဒိနိတ် assign သငျ့သညျ,
သငျသညျ egeomates (မှာ) အယ်ဒီတာထံစာရေးပါ။ com နဲ့ကျွန်မအသေးစိတ်အတွက်ပိုပြီးရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။
ငါကိုသြဒိနိတ်ဘောင်ထဲမှာသြဒိနိတ်သူ့ဟာသူထဲမှာမသော DXF ဖိုင်အဖြစ် refernciar နိုင်မလဲ? MicroStation ကြိုက်နှစ်သက်မပိုfácil..peroဖြစ်ပါတယ်နှင့်အတူငါထင် ..
ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 ပု
ကျွန်မပုံ၏တန်ဖိုးမှဆွေမျိုးမှားယွင်းတဲ့ရှုထောင်တန်ဖိုးများကို detect ဘူးဘယ်လို, တစ်ဦးစုံစမ်းမှုရှိသည်။
ဒီဇင်ဘာလ 2014 ပု
-Supongan နှစ်နှစ်အတွင်းစတင်မြို့ပြ cadastral စစ်တမ်း: အဘယျနညျးတန်ဖိုးများကိုလျှောက်ထားသူတို့တန်ဖိုးများရှိသည်နှင့်ကောက်ချက်ချကြပြီမဟုတ်မှန်လျှင်, 100% လျှောက်ထားရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။
စာရင်းစစ်ချုပ်၏ Superior တရားရုံး၏ဖြစ်နိုင်သောကန့်ကွက်ဖြစ်ပါသည်, သင်တန်ဖိုးသက်သေမပြကြပါလျှင်ကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်ဂရုစိုက်သင့်တယ်ဘယ်အရာကို, 100% ကြောင့်တန်ဖိုးများကိုစုဆောင်းရန်သူတို့ကိုလိုအပ်ပေလိမ့်မည်။
သက်ရောက်မှုအလွန်မြင့်မားသည်မဟုတ်ဒါကြောင့်ပြည်မှ technifies အခါဖျော်ဖြေပွဲ, တစ်အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။
အခြားရှုထောင့်ရှိသည်ဟုဆိုကာဖြစ်ပါတယ်တန်ဖိုးများ Catalog ၏အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုရသနည်း။ စျေးနှုန်းများနှင့်အတူအဆောက်အဦးများ, လား? မြို့ပြမြေယာတန်ဖိုးများပါသလား ကျေးလက်မြေယာ၏တန်ဖိုးများနှင့်အမြဲတမ်းကောက်ပဲသီးနှံပါသလား
ကတ်တလောက်လောလောလတ်လတ်မှအဆင့်မြှင့်တန်ဖိုးများနှင့်အတူကိုပြင်ဆင်နေကြသည်လျှင်။ လူများ, သငျသညျသာ, ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆို, ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုး paid ဘယ်တော့မှများအတွက်ပေးဆောင်ဖို့အသုံးပြုနေလျှင်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိ 100% မှ Apply တစ်ဦးချွန်ထက်သောထိုးနှက်ကြေညာချက်ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ဒါကအစားအကြိုးခံစား၏, လူတွေသာပေးချေရန်လာသောအခါကြည့်ဖို့မြှို့နယ်ရလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Mora တိုးပွါးလိမ့်မည်, သင်တန်ဖိုးသာလှည့်ပါလိမ့်မယ်သိကြရသောအခါ။
ဒါကြောင့်လိုအပ်သောစီစဉ်ရန်။ မြို့အစည်းအဝေး၏ TSC အက်ဥပဒေဖို့ထောက်ခံမှု, ခေတ်မီများ၏သက်ရောက်မှုဆိုပါမှနှစ်ဦးစလုံး။
Yaredi Harobi Mejia သိပ်မရှိပါဘူး သူ says:
တချို့ကမြူနီစီပယ်သို့သော်အဘယ်သူမျှမ cadastral စစ်တမ်းနည်းပညာမြို့ပြရှိ၏တန်ဖိုးများကိုငါးနှစ် 2015-2019 ၏ကတ်တလောက်ရှိသည်, မှန်ကန်သောဦးစီးဌာန Cadastral ၏စတင်တိုင်ပင်ကဤတန်ဖိုးများကိုအဘယ်ကဲ့သို့ရှိသည့်ကျေးလက်ဒေသများတွင်ယူဖို့အကောင်းဆုံးခြေလှမ်း process လုပ်တယ်ကြောင်းဖြစ်လိမ့်မည် 30% ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေ၌ပြုပါရန်, လူထုအုံကြွမှု technified ။
Luis ARMANDO ROJAS သူ says:
နိုဝင်ဘာလ 2014 ပု
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ, ငါအလုပ်လုပ်ရှိရာကုမ္ပဏီ, UAVs အသုံးပြု. ကောက်ပဲသီးနှံနှင့်တိရစ္ဆာန်စစ်ဆေးရေးခွင့်ပြုပါရန်, လေယာဉ်ခရီးစဉ်အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့်ပုံရိပ်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက် software ကိုအပါအဝင် multispectral ကင်မရာများနှင့် photogrammetric နှင့်အတူတစ်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ဝယ်ယူရန်စိတ်ဝင်စားသည် s ကိုပိုးမွှားထိန်းချုပ်မှုများနှင့်မျိုးစိတ်နှင့်ဆည်မြောင်း၏အရည်အသွေးအကဲဖြတ်, အစစ်အမှန်ကာလ၌သူတို့ထိရောက်မှုတိုးတက်စေရန်ကွဲပြားခြားနားသောပိုင်ဆိုင်မှု၏ status ကိုသိရန်။
သူတို့ကဖြစ်စေမျဉ်းလမ်းဆုံ polylines သို့မဟုတ် AutoCAD သို့မဟုတ် MicroStation ဆွဲနေတဲ့ CAD သတ်မှတ်ဖေါ်ပြတဲ့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ရှိသည်။
Gachuz သူ says:
UTM သြဒီနိတ် (20 မှတ်) နှင့်တစ်ဦးချင်းစီကိုသြဒိနိတ်များအတွက်အမှတ်အသား, ID8L980G 20.408165 -99.36207333 (ID ကို, လတ္တီတွဒ်, လောင်ဂျီတွဒ်), UTM 8L980G ဧရိယာ 14 462223.62 မီတာမေးမီတာ N ကိုအီး 2256691.52 အတွက်အမျိုးအစားဖိုင် KML နှင့်အတူဖိုင်တစ်ဖိုင် KML မှာ google ထင်းနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ ။ ဒါပေမယ့် AutoCAD dwg မှပြောင်းတလက်ပေါ်နှင့်အခြားလက်ပေါ်နှစ်ခုကိုမတူညီတဲ့ data တွေကိုအမှတ်အသားအကြှနျုပျအပျေါသို့သွားရာမှတ်, ပေးသည်ငါ့ကိုပေးသည် ??????